နော်ဝေအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(543 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ...လောင်းကစားအမြဲနော်ဝေအတွက်ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များမှုပျော်မွေ့မပေးပါ။ ကို '40s နဲ့' 50s များတွင်ပင်ရိုးရှင်းသောကဒ်ဂိမ်းများကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကအတည်ပြုမခံခဲ့ရပါ။ အခုဆိုရင်နော်ဝေလောင်းကစားနော်ဝေပူဇော်ခွင့်ရှိသည်အရာနှစ်ခုကိုအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများ, ရှိပါတယ်။ Norsk Tipping ထီ, အားကစားလောင်းကစားနှင့် instant ဂိမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, Norsk Rikstoto မြင်းပြိုင်ပွဲအပေါ်လောင်းကစားထိန်းချုပ်သည်။ slots တိုင်းပြည်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များ, ဒါပေမဲ့သူတို့ 2007 အတွက်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ကြသည်, ထို့နောက်အထူးကတ်များလိုအပ်ကြောင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဗီဒီယိုဆိပ်ကမ်း၏ပုံစံအတွက် re-ပေးအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားကတ်များကစားသမားဘဏ်စာရင်းဆက်စပ်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောကန့်သတ်နိုင်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြ၏။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားနော်ဝေတွင်တရားဝင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီမှာအခွအေနေမဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ Norsk Tipping, နော်ဝေအားလုံးကိုထီနှင့်အားကစားလောင်းကစားထိန်းချုပ်သောပြည်နယ်ကုမ္ပဏီ, 2002 တွင်အွန်လိုင်းသွားလေ၏။ လောလောဆယ်ဒီနော်ဝေနိုင်ငံခြားဆိုဒ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့ဒီဇင်ဘာလ 2008 ထံမှအဖြစ်နော်ဝေကစားသမားတရားဝင်, အားကစားကစားနည်းထားနိုင်ပါတယ်ရှိရာသာ web site ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါတားမြစ်ချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လောင်းကစားဝိုင်းများ၏ဥပဒေများအလားတူ circuitry ပါဝင်သည် - Norges ဘဏ်နိုင်ငံခြားလောင်းကစားအော်ပရေတာများ၏အကောင့်မှနော်ဝေအကောင့်များမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုမထားပေ။ သို့သော်အစိုးရသည်နိုင်ငံခြားပံ့ပိုးပေးသေးအကောင်အထည်ဖော်ရကြပြီမဟုတ်, နှင့်နိုင်ငံခြားအော်ပရေတာကဒေသခံကစားသမားမှရရှိနိုင်ပါသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
ထိပ်တန်း 10 နျောအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
နော်ဝေကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်နော်ဝေကနေကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ယမ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်း၏နိုင်ငံများတွင်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးကိုဆက်လက်ယနေ့တွင် fjords, လှပသောရေတံခွန်များ, ရေခဲများနှင့်ဝင်ရိုးစွန်း Aurora ၏လှပသောနိုင်ငံအတွင်းရှိတည်ရှိသည် - နော်ဝေ၌တည်၏။ တစ်ဦးကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုနှင့်အတူဤအံ့သြဖွယ်နိုင်ငံကလစျြလြူရှုသင်စွန့်ခွာမထားဘူး။ ကျနော်တို့အော်စလို၏လမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်အမှုအရာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူသွားကြသည်ကိုဘယ်လိုထွက်ရှာပါ။ လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ပိုင်ထိုက်သောဘာတွေလဲဒီတိုင်းပြည်ထားမည်လား
နော်ဝေ - တိုင်းပြည်နှင့်၎င်း၏သမိုင်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်;
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခု« Norsk Tipping »နှင့်« Norsk Rikstoto » - လောင်းကစားဝိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်အာဏာရှိပါသည်;
အားကစားဖြစ်ရပ်များ, ခြစ်ရာကတ်များသင့်ပင်လယ်ဓားပြ, 2015 ကတည်းကဖဲချပ်ဝေအပေါ်အလောင်းအစား Authorized ထီ။
အားလုံးနိုင်ငံခြားလောင်းကစားရုံ 2010 ကတည်းကပိတ်ပင်ထားပြီအားလုံးမဟုတ်နိုင်ငံတကာက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ထားကြသည်ကတည်းက, များစွာသော, တရားမဝင်ကစားရန်ဆက်လက်;
norsk-tipping.no/kongkasino - တစ်ခုတည်းသောအတည်ပြု site ကို။
နော်ဝေစကင်ဒီနေးကျွန်းဆွယ်၏အနောက်ဘက်တစျပိုငျးကိုတွင်တည်ရှိသည်ဖြစ်သောမြောက်ပိုင်းဥရောပ, ၏နိုငျငံတျောဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာလည်းသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတပြင်လုံးကိုပြပါဝင်သည်။
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, တိုင်းပြည်၏အမည်ကို "ဟုအဆိုပါ Old Norse စကားလုံးမှ လာ. Norðrvegr တိုင်းပြည်ကအရမ်းကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုသည်၎င်း၏သမိုင်းအပေါ်အမှတ်အသား left "အရာကိုဆိုလိုသည်" ။ မြောက်ဘက်၏လမ်း "ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနော်ဝေသည်အဘယ်အရာအတွက်ရေခဲခေတ်အလွန်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲရာသီဥတုခဲ့, ဒါကြောင့်လူနေထူထပ်သောခံခဲ့ရပြီးနောက်။
သို့သော်လူဦးရေရဲ့အပေါ်ယံမြေဆီလွှာသိပ်သည်းမှုတစ်ခုတိုးနှင့်အတူလျော့ကျနှင့်လူဦးရေရဲ့ယောက်ျားတစ်ဝက်ကျော်ကြားမှုနှင့်ဥစ္စာဓနတောငျ့။ ဗိုက်ကင်းအောင်ပွဲတွေထို့ကြောင့်, အလွန်မကြာမီခေတ်, ဝင်ငွေတူရကီကိုယ်တိုင်ကမှတက်ဖြစ်သည့်များ၏နယ်မြေ။
အဆိုပါ 18-19 ရာစုအတွင်းနော်ဝေအိမ်နီးချင်းဒိန်းမတ်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာလာလုနီးပါးလွတ်လပ်သောပြည်နယ်၏ status ရှုံးသည်။ သို့သော် 1905 အတွက်လူကြိုက်များတဲ့မဲ၏ရလဒ်များကိုဆွီဒင်နှင့်အတူပြည်ထောင်စုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာကိုရရှိခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်နော်ဝေရဲ့ဦးဆံပိုင်ဘုရင်စနစ်, ရှငျဘုရငျ၏နာမကိုအမှီ Harold V. ဖြစ်ပါသည်
ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန် strogo.Po ဖြစ်ပါသည်, တခါမှာဆိုပါစို့ Swedenand ဖင်လန်လောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ခွင့်အာဏာကြသူသာ2ကုမ္ပဏီများသည် (« Norsk Tipping »နှင့်« Norsk Rikstoto »), ရှိပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကအားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်အသင့်ပင်လယ်ဓားပြအပေါ်အလောင်းအစားတစ်ခုထီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအစက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ပေးသောယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား 18 နှစ်အသက်ကန့်သတ်ပါဝင်သည်။
နော်ဝေအတွက် slot စက်တွေ 2001-2004 အတွက်လျင်မြန်စွာပန်းပွင့်ခဲ့ပေမယ့် 2007 အတွက်အစိုးရကသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားဟာတင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုမိတ်ဆက်နှင့်သိသိသာသာ၎င်းတို့၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ။ တိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမရှိပိုကောင်းကံကောင်းပါစေခဲ့: နော်ဝေမှာရှိတဲ့ပိတ်ပင်ထားဇွန်လ 2010 ကတည်းကလုံးကိုအဓိကရေခြားမြေခြားက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဘဏ်များကမ္ဘာတဝှမ်းနျောအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားလုံးကို debit နှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနေကြသည်။
သငျသညျအိမျမှာအခြား partiyu- ဖဲချပ်ဝေစီစဉ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်, ထို့နောက်ထိုသို့သင်တို့သည်အလျှင်းမဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စနစ်တကျဖွစျလိမျ့မညျနှင့်သင့်အလုပ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း status ကိုတာဝန်ရဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများလျှင် - သင်မှပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုလွတ်မြောက်ရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မှုသတင်းအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းမှထိုကဲ့သို့သောတင်းကျပ်သောသဘောထားကမှမကြာခဏတရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ဖဲချပ်ဝေကလပ်အသင်းအတွက်စီးနင်းမှု၏အစီရင်ခံစာများရောက်ကြပါ၏များနှင့်ပရိတ်သတ်များစိတ်အားထက်သန်တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာပျော်စရာအဘို့ကစားရန်ရှိသည်။
ဗိုက်ကင်းသင်္ဘောပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Huk Aveny 35 ။ 1931 ကတည်းကသင်္ဘောဒီစုဆောင်းမှု turistov.Ekspozitsiya အဆိုပါ 3th ရာစုအတွင်းတည်ဆောက်ထားမယ့်9အာကာသယာဉ်, ဖြစ်ပြီး, 1,000 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်အိပျမျက်စိနှင့်စပ်စုစိတ်နှစ်သက်တော်မူ၏။
ပြတိုက် Munch ။ နေရပ်လိပ်စာ: Toyengata, 53 ။ ဒါကပြတိုက်ကြီးစွာသောအနုပညာရှင်၏ဘဝလိုက်ပါသွားကြောင်း 28,000 ပန်းချီ, ပိုစတာ, ပုံကြမ်းများနှင့်အပိုငျးအအကြောင်းကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ပြတိုက်မှတာဝန်ခံဝင်ပေါက်အခမဲ့ 18 အောက်မှာဧည့်သည်။ ဒီမှာပန်းချီဆရာနှင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ပြသပါ။
အပန်းဖြေပန်းခြံ "Tusenfrid" ။ နေရပ်လိပ်စာ: Hoyungsletta, 1407 အမျှ (ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အော်စလိုကနေ 20 ကီလိုမီတာ) ။ ဒီပန်းခြံစဉ်အတွင်းယမ်အတွက်အစွန်းရောက်အပန်းဖြေပန်းခြံ၏ဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ သငျသညျသံမဏိအာရုံကြောရှိပါကကျနော်တို့ကိုသင်«မြန်နှုန်း Monster »ကြိုးစားကြဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်: 6,000 မြင်းကောင်ရေတစ်စွမ်းရည်နှင့်အတူပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးပဲ 90 စက္ကန့်အတွင်း2km / h နှင့်ချီတက်ပွဲ7အကြိမ်တစ်မြန်နှုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်သင်ကပြည်နယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် အလေးခြိ၏။ တစ်ရေပန်းခြံ, သားသမီးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအများအပြားကဖေးလည်းရှိပါသည်။
ပန်းခြံ "။ Gustav Vigeland" လိပ်စာ: Nobel တံခါးဝ 32 ။ သင်ဖွင့်လှစ်သောလေထုထဲတွင်ပန်းပုစဉ်းစားရန်ပိုနှစ်သက်ပါသလား? ထိုအခါဤ option ကိုသငျသညျစုံလင်သော။ ဤတွင်အဆိုပါနောက်ပြီးသစ်ပင်များနှင့်လှပသောရှုခင်းများလူတို့တွင်သင်တို့ကိုကျောက်နှင့်ကြေးဝါနှင့်ဖန်ဆင်း 212 ပန်းပုတွေ့လိမ့်မည်။
မြို့ခန်းမအဆောက်အဦ။ နေရပ်လိပ်စာ: Fridtjof Nansens plass ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းဝင်ပြင်ပကနေအဆောက်အဦးများနှင့်အတွင်းပိုင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1990 ကတည်းကကဒီမှာနိုဘယ်ဆုကျင်းပခဲ့သည်။ အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်းသင်ခန်း, ခမ်းနားပန်းချီကားများနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများတစ်ခမ်းနားအလှဆင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နော်ဝေနှင့်နော်ဝေနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ
ခန့်သာ5သန်းမြို့သားတို့ - နော်ဝေသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ နော်ဝေ၏အဓိကမှာသဘာဝဘဏ္ဍာကို - ရေနံ။ ဒါဟာ 1969 တှငျတှေ့ခဲ့ကတည်းကဥရောပသို့တင်ပို့မူပြီ
Paperclip တီထွင်နှင့်နော်ဝေ Johan valerate မူပိုင်ခွင့်,
နော်ဝေအတွက်မိုးလေဝသလျှပ်စီးမြန်နှုန်းမှာပြောင်းလဲနေပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီဥတုမကြိုက်ဘူး: တစ်သက်ဆိုင်ရာစကားပုံတောင်ရှိတယ်လား ပြဿနာတစ်ခု, "15 မိနစ်မစောင့်,
« Brunost » - အညိုရောင်ဆိတ်သငယ်ကိုဒိန်ခဲ, ဒီတိုင်းပြည်အတွင်းအများဆုံးအကြိုက်ဆုံးခဲဘွယ်စားဘွယ်များထဲမှ;
ဒီမှာကမိသားစုကလေးအရေအတွက်သုခချမ်းသာများရှင်းလင်းနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုမှာသားသမီးများ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်က - သုံး;
ရှငျဘုရငျ၏လက်နက်၏အင်္ကျီကို "အားလုံးနော်ဝေများအတွက်" ဟုအဆိုပါဆောင်ပုဒ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်;
ဤတိုင်းပြည်များတွင်ဒေသခံလစာ5တထောင်ယူရိုမှ 7, ဒါပေမယ့်အခွန်မြင့်မားသည်နှင့်, ထုတ်ကုန်အလွန်စျေးကြီးတယ်, ပို. ပင်စျေးကြီးန်ဆောင်မှုများ (စသည်တို့ကိုတက္ကစီ, ပြုပြင်ခြင်း,);
"Aquavit" ( "ရှင်သန်နေသောရေ" အတွက်လက်တင်) - ထို 35 အတွက်အမျိုးသားရေးအရက်သောက် - 50% လုပ်ငန်းများ၌အာလူးအရက်ဖြစ်တယ်, နံ့သာမျိုးပေါ်နှစ်ပေါင်းများစွာထုံမွှန်း (ဇီ, နံနံ, စမုန်နက်, anise, သစ်ကြံပိုး, စမုန်နက်, စိန့်ဂျွန်ရဲ့ wort) ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အရက်မဝယ်ကြဘူး။ ကိုယ်ကသာ« Vinmonopolet »အထူးပြုစတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချသည်။ ဤကွန်ယက် alkomarketov ရက်ရက်တွင်ပြည်နယ်နှင့်သာအလုပ်ကပိုင်ဆိုင်သည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 နျောအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.1.2 နော်ဝေနှင့်နော်ဝေနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ